5 zvinyorwa zvinoburitswa zvakarongwa muna Chivabvu | Zvazvino Zvinyorwa
5 zvinyorwa zvinyorwa zvakarongerwa Chivabvu
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Bvunzo, Mabhuku, Nhema nhema
Chivabvu. Uye isu tiri sezvatiri, asi zvinoita sekunge zvirinani. Zvakare kwaari kutsikisa musika izvo, kunyangwe zvese, zvaenderera mberi kushanda. Saka uchiona chimwe chiedza chichivhenekera kumagumo kweiyi tunnel tunnel, ndipo pavanoenda 5 mazita akasarudzwa ane launch yakarongerwa mwedzi uno. Isu tinovimba kuti izvi ndizvo uye, pamusoro pezvose, kuti isu tinogona kuenda kuzvitoro zvemabhuku kwavari.
1 Vacheche - Carmen Mola
2 Pandemic - Slavoj Žižek
3 Ropa MuChando - Jo Nesbø
4 Diary yaEtty Hillesum. Hupenyu hwakavhunduka
5 Vatadzi - Carmen Román
Mucheche - Carmen Mola
Yakarongerwa 28 yaMay, isu tine iyo zita rechitatu naCarmen Mola, chiitiko chazvino kwazvo chenyaya yematsotsi, uye kuzivikanwa kwake kunoramba kuri chakavanzika. Uye chikamu ichi chine nyeredzi Elena White vanozvitengesa kwatiri parizvino kuwedzera zvechisimba uye kuvhundutsa.
Zano racho rinotenderera ChiCzech, nhengo yeBAC (Case Analysis Brigade) uyo zvino anotora kuraira uye ndiani inopera mushure mekupedza husiku hweChinese Nyowani Nyowani nemutorwa. Kana vamwe vake vasvika tsvagaIvo vanozobatsirwawo naElena Blanco, uyo akasiya mapurisa mushure memhosva yapfuura yePurple Network. Uye kuferefetwa kuchavatungamira kuenda ona kuti kune zvakawanda zvakavanzika zvakawanda kuseri kwekutsakatika ikoko.
Denda - Slavoj Zizek
Yakarongerwa 20 yaMayizvi Ensayo nemuzivi, nyanzvi yezvematongerwo enyika uye murwiri wezvematongerwo enyika Slavoj Žižek nderimwe remabhuku makuru erudzi. Žižek imwe yeiyo vane mukurumbira uye vanotevera vanyori zvenguva ino, uye atosaina anopfuura makumi mana emabhuku efilosofi uye cinema kana psychoanalysis. Y vese profits chebhuku rino chichagadzirirwa kuna NGO Vanachiremba vasina miganhu.
Mune izvi iye anotsvaga a kuratidzwa yekukurumidzira pane iyo dambudziko recoronavirus iyo inoparadza nyika yose. Kufungisisa pane izvo ukama ane ne Políticala hupfumi, the kutya own uye general uye rusununguko kana, asi, izvo-izvo rusununguko rwakatemerwa.
Izvo zvinotitungamira kuti tifunge nezve iyo kubatana pakati pe kuwedzera denda repasi rose uye economic model yenzanga dzemazuva ano. Uye kunyanya inomutsa mubvunzo wekuti tingagone sei shanduko Kwete chete hupenyu hwedu, asi mhando yese yenzanga yakavakirwa pamitemo yakadzikira nyore nyore mumwedzi mishoma.
Ropa muchando - Jo Nesbø
Zvakare kwaari 28 yaMay ichangoburwa kubva kuNorway tsotsi inoverengera tenzi akarongerwa kuvhura mabvazuva Ropa muchando Ndicho yakazvimirira zita kune akateedzana anozivikanwa eKomishina Harry Hole. Yakapfupika uye iine protagonist, Olaf Johanssenzvinova a sicario akabhadhara, a gamba uyo anotiudza nyaya yake mumunhu wekutanga.
Diary yaEtty Hillesum. Hupenyu hwakavhunduka
Kutanga kwayo kwakarongerwa 4 yaMay.
Etty Hillesum yaive yeiyo MaJuda bourgeoisie kubva kuAmsterdam uye iye nemhuri yake vakafa mukati Auschwitz muna 1943. Vavo Tsamba. Iko kunyanya kwe uchapupu kuti Etty Hillesum akasiya mune diary iri maari kukosha kwevanhu uye kudarika izvo zvakakodzera kuti zvirangarirwe mugore rino regore rechimakumi manomwe nemashanu rekuguma kwechipiri Hondo Yenyika.
Anotadza - Carmen weRoma
Roma ari mutori wenhau akareba akamira mukati South Channel uye mune dzimwe nhau. Mubhuku rino unounganidza iyo mifananidzo yevamwe vakadzi munhoroondo, yakatarwa nechinyadzo che zvinonzi zvivi akazvipira uye kuvhiringidzika pamwe chete navo anoda kusununguka kana kungoti kubva kupona munzira chete dzavaigona kana dzavaigona napo.
Nekudaro tine mazita akafanana neayo e Phryne, mumwe wevakadzi vakanaka kwazvo vekare Girisi kana Sicilla, pfambi yakakurumbira muRoma. Zvakare kubva ipapo, anotiudza nezvaJulia, mwanasikana waMambo Augustus, Agrippina kana Messalina, mudzimai waMambo Kraudhiyo. Kana izvo zve Maria Magdalena, Madame Pompadour, zvedu Bella Otero kana mutambi Joan Crawford, uyo akatiza pamba pake ndokuyedza mhanza yake mushow, asi akasungwa nekuda kwechipfambi.
Source: UDL kugovera, Casa del Libro, ndinoda kuverenga, Edhisheni Anagrama
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » 5 zvinyorwa zvinyorwa zvakarongerwa Chivabvu
Kuongorora kwe "Campos de Castilla"
"Prosas profanas" iyo itsva naRubén Darío